Why S/4 HANA? – it4a
ဒီနေ့မှာတော့ SAP S/4HANA Enterprise Ledger ကိုအသုံးပြုသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာထဲက အချက်၆ချက်ကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
1. Single Source for Financeလုပ်ငန်းအတွက် အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ ငွေကြေးပိုင်းမှာ Financial Accounting အတွက်ရော၊ Management Accounting အတွက်ရော တစ်နေရာထဲမှာ လုပ်ဆောင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Finance ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်ရှုစစ်ဆေးရမယ့် Data တွေကလည်း တစ်စုတစ်စည်းတည်း အချိန်နဲ့တပြေးညီ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ခြင်း၊ Consolidation လုပ်နိုင်ခြင်း၊ Plan ဆွဲနိုင်ခြင်း အစရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
2. Integrated & ModuleFinance ပိုင်းအပြင် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ရှိနိုင်မယ့်အခြားသော Function များ (ဥပမာ Procurement အဝယ်ပိုင်း, Sales အရောင်းပိုင်း အစရှိသဖြင့်) မှာလည်း Module အဖြစ်ပါဝင်နေမှုကြောင့် Data အားလုံး၊ Function အားလုံး တစ်စုတစ်စည်းတည်း တစ်ခုတည်းသော Platform မှာ သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
3. Instant Insight to Actionလိုအပ်သော Report များကိုလည်း အချိန်နဲ့တပြေးညီ မြန်မြန်နဲ့လွယ်ကူစွာကြည့်နိုင်ခြင်း၊ လိုအပ်တဲ့ Dimension အလိုက် Report များကို မိမိကိုယ်တိုင် ထုတ်ယူလို့ရမယ့် Self Service Analytics Function တွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့၊ Action ယူဖို့ ပိုမိုလွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
4. Agile & Responsiveလုပ်ငန်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုပြောင်းလဲတာနဲ့ Business Changes တွေနဲ့ တစ်ချိန်တည်း System မှာလည်း အလွယ်တကူလိုက်ပါပြောင်းလဲလို့ရတဲ့ Data Model တွေ Functional အပြောင်းအလဲ ချဲ့ထွင်လို့လည်းရပါတယ်။
5. User Experienceမိမိတို့ရဲ့ ရာထူးလုပ်ငန်းဆောင်တာအလိုက် လိုအပ်တဲ့ Function တွေကို အခက်အခဲမရှိ System ပေါ်မှာ Device အမျိးအစားမရွေး အလွယ်တကူအသူံးပြု၍ လုပ်ငန်းပိုမိုတွင်ကျယ်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါတယ်။
6. Closing on the Flyလကုန်အထိစောင့်စရာမလိုဘဲ အချိန်မရွေး Financial Closing (Soft-Close) လုပ်၍ လုပ်ငန်းအခြေအနေကို အလွယ်တကူ စစ်ဆေးသိရှိနိုင်သလို လကုန်ပိုင်းမှာလည်း လချုပ် (Hard-Close) လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလည်း လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
SAP S/4HANA ရဲ့ Finance က banking finance ပိုင်းကို ဒီအချက် ၆ချက်ဖြင့် အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိစေတဲ့ SAP S/4HANA Enterprise Ledger ကို အသုံးပြုဖို့စိတ်ဝင်စားရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ it4a က လူကြီးမင်းတို့ကို ကူညီပေးဖို့ အမြဲအဆင်သင့်ရှိနေပါတယ် ခင်ဗျ။
#it4a #ERP #SAP #S/4HANAEnterpriseLedger #Bank #Finance
« New Normal မှာ ပုံစံအသစ်နဲ့ လုပ်ငန်းဘယ်လိုလည်ပတ်မလဲ။ BOBJ ဆိုတာဘာလဲ? »
erp S/4Hana SAP